China OEM Automatic nkuanya Pencil Ezigbo ịnweta Natural N'ile anya 3 agba Brow pensụl na ahịhịa mmepụta na emepụta | Jinfuya
OEM Akpaaka nkuanya Anya Ezigbo ralnweta Echiche 3 agba Brow Anya Anya na ahịhịa
Gini mere anyi ji acho nku nkuanya?
Nkuanya bụ mpaghara ntutu dị mkpụmkpụ karịa anya nke na-agbaso ụdị akụkụ dị ala nke brow ridges nke ụfọdụ anụmanụ. Isi ọrụ ha bụ igbochi ọsụsọ, mmiri, na irighiri ihe ndị ọzọ ka ha ghara ịdaba na anya anya, mana ha dịkwa mkpa maka nkwukọrịta mmadụ na ihu mmadụ. Ndị mmadụ na-achọkarị ịgbanwe nku anya ha site na iwepụ ntutu na ntecha.
Chọrọ pensụl ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka nku anya gị na-enwu gbaa, jupụta oghere n'etiti ntutu ma ọ bụ dozie ọdịdị ha. Onyunyo ga-enye ụda na nku anya. Ma iji zụọ ntutu isi adịghị mma, ị ga-eji gel ọzọ. Ọ bụrụ na nku anya gị na-enwe ọdịdị zuru oke, jiri pencil ma ọ bụ nku anya.
Ihe Nke 4030-1
Agba Agba aja, Nwa, Ọkara agba aja
Adabara Skindị anụ niile, biko dakọtara agba ntutu gị iji kpebie nke nkuanya pensụl ị kwesịrị ịhọrọ.
Ọdịnaya Net 1g
Ọrụ Mma nku anya Mma
Anyị na-ekwe nkwa vegan na 100% enweghị nsogbu-n'efu
AKWKWỌ - Ọ dịghị mfe ịjụ oyi, ihe na-adịghị mmiri, ọsụsọ, na-egosi smudge ogologo oge.
Ọ dị mfe iji ngwa ọrụ - Pụrụ iche isi ndụdụ n'ọnụ isi, see ngwe nke nkuanya ma nọgide na-agba n'ime evenly tinyere brow-udi ị na-abịaru ikpeazụ nzọụkwụ maka ike doro anya na ọdịdị nku anya.
AKWKWỌ AKWUDKWỌ - Mfe iji dọta nku anya dị mma ma baa ọgaranya, gosipụta smudge, mee ka nku anya gị chọọ ọdịdị ụbọchị niile.
OJI - Mee ka nku anya gị dị elu site na ijuputa oghere iji mepụta ọdịdị nke okike, jikọtara nku anya maka nchọgharị akọwapụtara n'ụzọ zuru oke.
Ogologo oge - --kpụrụ na-adịte aka na-eme ka o doo anya na etemeete gị ga-adịgide ụbọchị niile na-enweghị smudging ma ọ bụ na-agbachapụ site na ọsụsọ, mmiri ozuzo, na ọbụna egwuregwu mmiri.
Nke anyi Pensụl akpaaka na-akpaghị aka na ahịhịa e mepụtara iji nyere gị aka ịmepụta enweghị ntụpọ na eke na-achọ nku anya.
Anyị pụrụ iche zita mejupụtara imewe na-aka easly ise edoghi na gị brows, The udidi bụ ezigbo enweghị caking, ndammana na-ezukọta na-etolite a mara mma nkuanya na zuru okè okpokolo agba gị ihu maka ihe ọ bụla etemeete anya.
Nku anya gị ga-adị ka nke zuru oke, na-egbu maramara ma kọwaa.
Ọ dị mfe itinye, na-eme ka ọ zuo oke maka ndị mbido na ndị ọkachamara. Mkpị nkuanya anya na-achagharị na-enye agba mara mma nke na-adịgide ụbọchị niile.
# Ọ dịghị smudging / # Ọ dịghị fading / #Easy iji tinye / # Mfe iwepụ
# Waterproof / # Ogologo Na-adịgide / # Nlekọta Anya
Etu esi eji akpaka Anya nkuanya iji depụta ọdịdị nkuanya zuru oke?
Pensụl nku anya anyị bụ ihe na-adịghị ekpuchi mmiri na ọsụsọ, mana ọ dị nro nke ị nwere ike wepu ya ngwa ngwa site na mpempe ihe nhichapu ma ọ bụ mmiri na-ewepụ mmiri.
Nke gara aga: N'ogbe Silky Liquid Foundation 8 agba Weightless 30ml na eke creamy udidi na Moisturizing Formula
Osote: Nkuanya Enhancer Private Label Natural Ingredient brow Uto Nutrition Liquid ọbara
Pensụl akpaaka na-akpaghị aka